सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, प्रतितोला ९४ हजर नाघ्यो ! - Shikhar Post Shikhar Post
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, प्रतितोला ९४ हजर नाघ्यो !
काठमाडौं । सुनको मूल्यमा बिहीबार पुनः नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तेजाबी सुनको मूल्य भने ९४ हजार ६५ रुपैयाँ प्रतितोला तोकेको छ ।
प्रकाशित मिति : बिहीबार, ८ श्रावण २०७७ १२:०१